बुलबुल नेपाल | बीपीएलमा सिक्सर्सको दोस्रो खेल, आज पनि चम्किएलान् सन्दीप ?
सोमबार ०९, असार २०७६ २१:३०
बीपीएलमा सिक्सर्सको दोस्रो खेल, आज पनि चम्किएलान् सन्दीप ?
काठमाडौं, पुष २५ । बंगलादेशमा भइरहेको बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) अन्तर्गत नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध टोली सिल्हेट सिक्सर्सले आज (बुधबार) दोस्रो खेल खेल्दै छ । सिक्सर्सले आज चिट्टागोंग भिकिङ्ग्ससँग ढाकाको शेरे बांग्ला रंगशालामा खेलिरहेको हो । खेल दिउँसो १२ः१५ बजे शुरु हुनेछ ।
प्रतियोगितामा पहिलो खेलसमेत सिक्सर्सले सोही मैदानमा खेलेको थियो । आइतबार भएको उक्त खेलमा कोमिल्ला भिक्टोरियन्ससँग हार बेहोरेको सन्दीपको टोलीले पहिलो जित निकाल्न आज मैदान उत्रने छ । पहिलो खेलमा शानदार प्रदर्शन गरेका सन्दीपले आजको खेलमा स्थान पाउने सम्भावना प्रवल छ ।
आइतबारको खेलमा अनुभवी स्पिनर इमरान ताहिरलाई बेन्चमा राखेर सन्दीपलाई खेलाइएको थियो । पहिलो खेलमा सन्दीपले १६ रन खर्चदैं २ विकेट लिएका थिए ।सिक्सर्सलेले भिड्ने चिट्टागोंगमा मुश्फिकुर रहिम (कप्तान), मोहम्मद शेहजाद, सिकन्दर राजा, केम्रुन डेलपोर्ट जस्ता नाम चलेका खेलाडी छन्।
मङ्गलबार, २४ पुष २०७५ मा प्रकाशित
Tags : #David Warner #sandeep Lamichhane # Sylhet Sixers #BPL